सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर !
Created on Thursday, 28 April 2016 14:05
देब पचभैया मगर
नेपाल मगर संघको ११ औ महाधिबेशन यही बैशाख १८ देखि २२ गते सम्म चितवनमा हुदैछ । ६६ जिल्ला, ६ भातृसस्था र १२ बिदेश स्थित प्रवास शाखा बाट सहभागी हुने यो महाधिबेशन आम मगरहरुको चाड पनि हो । चार बर्षको बिचमा मगरसंघले गरेका कामकारबाहीका बारेमा समिक्षा गर्ने र आगामी रणनिति तय गर्दै नया नेतृत्व चयन गर्ने समय पनि हो यो । सबै मगरहरुको साझा सामाजिक संस्था भएकाले पनि मगर संघ स्वदेशमा मात्रै होईन बिदेशमा समेत शसतm सस्थाको रुपमा परिचित पनि छ ।
संसार भरका मगर अटाउने सस्थालाई फुटाउन अहिले देशी बिदेशी शतिmहरु सक्रिय बन्दै गएका छन् । जाति,धर्म , क्षेत्र वा कुनै पनि बाहानामा मगरलाई फुटाउने उनीहरुको प्रपन्च छ । त्यसैले त आज सिङ्गो मगरात भूमीलाई तीन टुक्रा पारिदिएका छन् । मगरलाई अल्पमतमा पार्ने र कुनै पनि सवालमा टाउको उठाउन नदिने उनीहरुको भित्रि योजना हो ।
मगरकै बलिदानी पछि प्राप्त संबिधान मगर बिरोधी बनेको छ । अन्तरिम संबिधानमा उल्लेखगरिएका अधिकार समेत फालिएको छ ।
जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समाबेशीको कुरा सत्ताधारीहरुले हावामा उडाई दिएका छन् । पहिचानको मुद्धालाई माटोमै मिलाईदिएका छन् ।
यस्तो बेला नेता भनाउदा मगर अगुवाहरु जुटेर अघि बढ्ने कि फुटेर पछि पर्ने ?
त्यसैले पनि आज एउटा मगरले जितेर अर्को मगर हार्ने अवस्था हुनुहुदैन । हामीले देख्यौ, संबिधानले अधिकार खोस्दा एका तिर मगर आन्दोलनमा होमिएका छन् अर्को तिर संबिधान निर्माणको खुशियालीमा बिजय उत्सबको कार्यक्रममा पार्टी झण्डा समाउने पनि मगर नै छन् । ६५ प्रतिशत मगर रहेको मगरातको राजधानी पाल्पामा मगर नेतालाई हराई बिजय उत्सवमा पार्टी झण्डा समाएर नारा लाउने र उफ्रिने पनि मगर नै थिए ।
कस्तो बिडम्बना ! आज भनिदैछ, संबिधान कहिल्यै पुर्ण हुदैन, र यो कुनै धर्मग्रन्थ जस्तो फेरबदल गर्न नसकिने पनि होईन । हो त्यही कुरा आज मगरले उठाएका छन् र भनेका छन् संबिधानमा लेखिनुपर्ने अपुरा कुराहरु किन मगरको मात्रै बाकी राखेको ?
किन आदीबासी जनजाति , महिला , दलित र पछाडी पारिएको समुदायको आवाजलाई समेट्न नसकेको ?
कुरा छर्लङ्ग छ, बहुमतलाई फुटाएर अल्पमतले राज गर्ने देश हो यो। अनि चोत दिनेलाई भोट दिने पनि हामी, उनैलाई रिजाएर ब्यगत स्वार्थलोलुपतामा फसेका हाम्रै मान्छेले बिगारेको मुलुक पनि हो यो ।
हिजोको प्रश्न आज पनि ताजै बनेर आईरहन्छ, कि अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा मगरात बन्द गर्दा बन्द बिरोधीबाट आज मगरले पिटाई खानु परेको छ । मगर संघ पाल्पाका अध्यक्ष बल बहादुर गाहा लगाएतका सदस्यले तानसेनमा पिटाईखादा किन अन्य जिल्ला र क्षेत्रका मगरलाई टाउको दुख्दैन । मगरसंघले किन छानबिन गर्देन ?
एउटा जिल्ला बन्द हुदा अर्को जिल्ला बन्द हुदैन किन ? पार्टीको आदेश मान्ने अनि बन्द नगर्ने र पहिचान बिरोधी संग काध जोडेर हिड्ने मगर नेतालाई किन कारबाही गर्न सक्दैन मगर संघ ?
बन्दको बेला सुनियो, बन्द नभएका जिल्लामा मगर संघको नेतृत्व पहिचान बिरोधी पार्टीका छन् रे ? यस्तो पनि हुन्छ ? पार्टीले कारबाही गर्छ भन्दै आन्दोलनमा अनुहार नदेखाउन मिल्छ ? एउटा मगरलाई मगरात चाहिदा अर्को मगरलाई मगरात नचाहिने ?
मगर राज्य होईन, मगरात राज्यको माग गरेको हो भन्न किन नसक्ने ? मगराँतको अर्थ मगर जाति नभएर मगर जातिको थात–थलो र ऐतिहासिकता हो भन्ने कुरा किन मगर नेताले नै नबुझेको ? मगराँत भुमिमा पूर्खाहरुको रगत पोखिएको, हाड घोटीएको बिगत किन संझिन नसकेको ? त्यसकारण यि र यस्ता बिषयमा स्वम् मगरनै पहिले प्रस्त हुनुपर्छ । किनकी मगर संघ कब्जा गरेर फेलियर बनाउने दाउमा छन् राजनितिक पार्टीहरु ।
मगरले बुझ्नु पर्छ आदिबासी जनजाति महासंघका बर्तमान अध्यक्ष र महासचिबलाई माननिय बनाएर कसरी आन्दोलनलाई तुहाउन सफल भए दलहरु ?
लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाली काग्रेसको भर्खरैको महाधिबेशनलाई हेरौ ! त्यत्रा नेताले जित्दा किन केन्द्रिय सदस्यपनि पाएनन् मगरले ?
अनि यो पनि बुझ्नुपर्छ आन्दोलनलाई निश्कर्षमा पुर्याउन वा संगठनलाई निरन्तर अगाडि बढाउन पैसा चाहिन्छ ।
फेरी आन्दोलनको भाउ गाउ भन्दा शहरमा बढी छ । गाउ बाट शहर सम्म आउन कार्यकर्ताको गाडी भाडा तिर्ने पैसा जिल्ला संग छैन, आन्दोलन कारीलाई चिया नास्ता त के पानी सम्म खुवाउने रकम छैन कसरी हुन्छ आन्दोलन ? त्यसकारण मगर संघलाई बलियो बनाउन सवल आर्थिक उपार्जनका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
किनकी गाउ बलियो बने जिल्ला बन्छ, जिल्ला बलियो भए केन्द्र दरिलो बन्छ । त्यसको लागी सबै मगर एक ठाउमा उभिनु बाहेक अर्को बिकल्प छैन । त्यसकारण पार्टीको आर्शिवाद लिएर मगर संघ हडप्न खोज्ने भन्दा आम मगरका भावना, चाहाना र आवश्यकतालाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्ने, हाम्रो भन्दा राम्रो मगर नेता छान्ने अभिभारा आम महाधिबेशन प्रतिनिधिको काधमा छ ।
(बिगत १५ बर्ष देखि पत्रकारीतामा सक्रिय लेखक, आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघका पश्चिमाञ्चल प्रमुख एबं मगर पत्रकार संघका महासचिब हुन् । )